यूट्यूब: तपाईंको भिडियो रणनीति त्यहाँ के छ? | Martech Zone
यूट्यूब: तपाईंको भिडियो रणनीति त्यहाँ के छ?
आइतबार, जुलाई 16, 2017 आइतबार, जुलाई 16, 2017 Douglas Karr
हामी सधैं खाली स्थानहरूमा केन्द्रित हुन्छौं जब यो हाम्रो ग्राहकहरूको डिजिटल मार्केटिंग रणनीति आउँदछ। खोज ईन्जिनहरू केवल व्यवसायहरू र उपभोक्ताहरू जुन उनीहरूले खोजिरहेका ब्रांडहरू पत्ता लगाउनका लागि एक च्यानल होइनन्, एल्गोरिदमहरू अनलाइन एक ब्रान्डको अधिकारको उत्कृष्ट सूचक पनि छन्। हामी ब्रान्डमा ध्यान पुर्‍याउने सामग्रीलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा, हामी प्रत्येक प्रतिस्पर्धीको साइटमा रहेका सामग्रीहरू तुलना गर्छौं कि भिन्नता के हो हेर्न।
प्रायः ती भिन्नताहरूमध्ये एक हो भिडियो। त्यहाँ धेरै छन् भिडियो को प्रकारहरु त्यो उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर व्याख्याकर्ता भिडियोहरू, कसरी भिडियो, र ग्राहक प्रशंसापत्र व्यवसाय को लागी सबैभन्दा प्रभावकारी हो। कसरी र स्टाईल भिडियोहरू # यूट्यूबमा 8,332,,XNUMX२ अवलोकनहरू प्राप्त हुन्छन्, मनोरन्जन भिडियोहरूको छेउमा सबैभन्दा लोकप्रिय कोटी।
यदि यो भिडियो सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने समय हो भने, म तपाईंको कम्पनीलाई सन्तुलित रणनीति बनाउन सुझाव दिन्छु।
को लागी एक महत्वपूर्ण बजेट राख्नुहोस् व्याख्याकर्ता भिडियो त्यो २ मिनेट लामो छ। याद गर्नुहोस् कि यो भिडियो केही समयको लागि तपाईंसँग टाँसिनेछ, त्यसैले लगातार ब्रान्डि ens सुनिश्चित गर्दै, कुनै पनि समय-निर्दिष्ट उल्लेख हटाएर भविष्यको चिढाउने कार्य उत्तम रणनीति हुनेछ। राम्रो प्रदर्शन गर्दछ एक एनिमेटेड भिडियो $ 2k गर्न $ 5k हुन सक्छ - तर लगानी मा एक ठूलो प्रतिफल।
फिल्म गर्न तपाईं हरेक अवसर लिनुहोस् प्रशंसापत्र भिडियो। जे भए पनि यसको मतलब यो छ कि तपाइँ फिल्मकर्मीहरू भाडामा लिनुहुन्छ र तिनीहरूलाई तपाइँको ग्राहकहरुमा पठाउनुहुन्छ, तपाइँले यसमा बिल्कुलै लगानी गर्नु पर्छ। प्रशंसापत्र पिटाउन सकिदैन कि भरोसा को सूचक हो। ती सबै तपाइँको डिजिटल र प्रिन्ट माध्यमहरूमा लेखिएको सामग्रीको लागि पुन: निर्माण गर्न सकिन्छ। तपाइँको कम्पनी मा एक भावनात्मक प्रशंसापत्र को शक्ति को कम मूल्यांकन नगर्नुहोस्।
काम गर सोच्ने नेतृत्व भिडियो त्यसले तपाईंको कम्पनीको मानव संसाधन र संस्कृतिलाई स्पटलाइट गर्दछ जुन तपाईंलाई प्रतिस्पर्धीहरूबाट भिन्न गर्दछ। दक्षताका लागि, हामी प्राय: दिनको दुई वा दुई दिनका व्यापारका नेताहरूको शूटिंगका लागि तालिका बनाउँछौं। यो गरेर, हामी स्पटलाइट भिडियोहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन एक पटकमा एक व्यक्तिमा फोकस गर्दछ, वा हामी विभिन्न शीर्षकहरूमा थिमेटिक भिडियोहरू मिक्स गर्न र मिलाउन सक्दछौं।
यो नबिर्सनुहोस् कि भिडियोहरू तपाईंको साइटको लागि मात्र एक उत्तम सम्पत्ति होईन, यूट्यूबले आफै गुगलको छेउमा अनलाइन खोजीहरूको नेतृत्व गर्न जारी राख्छ। तपाईंको Youtube लाई अप्टिमाइज गर्नुहोस् च्यानल र तपाईंको प्रत्येक भिडियो अधिकतम प्रभावको लागि। ग्राहकहरू निर्माण गर्न र तपाईंको आफ्नै समुदाय सुरू गर्न नियमित आधारमा अन्य भिडियोहरू उत्पादन गर्नुहोस्।
कुनामा के छ? प्रत्यक्ष भिडियो। यूट्यूब प्रत्यक्ष प्रसारण खेलमा पहिले टहलिरहेको छ। हामी अझै प्रारम्भिक छौं, तर कहिलेकाहिँ उदाउँदो टेक्नोलोजीमा हाम फाल्नका लागि यो उत्तम समय हो। ठूला ब्रान्डले लगानी गर्नु भन्दा पहिले साना फुर्सद व्यापारहरूले फाइदा लिन सक्दछ र केही ठूलो बजार सेयर ड्राइभ गर्न सक्दछन्। यो निश्चय नै एउटा जुवाडे हो - तर हामीले यसलाई बारम्बार भुक्तानी गरेको हामीले देख्यौं।
बाट यो इन्फोग्राफिक भिजुअल जेड स्टूडियो भिडियोसँग काम गर्ने बखत यो च्यानल कत्ति महत्वपूर्ण छ त्यसको अवलोकनको साथ प्रदान गर्नेछ।
टैग: ग्राहक प्रशंसापत्र भिडियोव्याख्याकर्ता भिडियोकसरी भिडियोतपाइँ श्रोताको लागि यूट्यूब सहि छलाइभ स्ट्रिमिङप्रशंसापत्र भिडियोसोच्ने नेतृत्व भिडियोभिडियो को प्रकारहरुभिडियो तथ्या .्कyYouTubeyoutube प्रत्यक्ष
Design डिजाईन एलिमेन्टहरू जुन मोबाइल रूपान्तरणको लागि राम्रोसँग काम गर्दछन्
जुलाई,, २०१ at 17::2017। बिहान
मलाई यूट्यूब मन पर्छ। म फेसबुक लाइभबाट सीधा साइटमा सामग्री पुन: प्रयोग गर्छु। म पछाडि मेरो अवस्थित साइटहरूमा भिडियोहरू इम्बेड गर्न सक्दछु।
यूट्यूब लाइभ एक समुदाय छिटो चाँडो निर्माण गर्न एक उत्तम तरिका हो, र फेसबुक विपरीत, जहाँ मानिसहरू त्यहाँ छन्, विभिन्न कारणका लागि धेरै, म एक तथ्यको लागि जान्छु कि लोग एकल उद्देश्यका लागि YouTube मा छन्। एक भिडियो हेर्न। त्यहाँ एक समर्पित दर्शक छन्, र प्रत्यक्ष च्याटको साथ, यसले अनुभवलाई अझ व्यक्तिगत बनाउँछ। मैले hour घण्टा लाइभ स्ट्रिमहरू देखेको थिएँ जुन आश्चर्यजनक रूपमा धेरै उत्पादक थिए।